ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန် (ဇိုမီး)အဖွဲ့က တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင် လှိုင် အား ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့(Gal Hang Pah Tawi Na Award) ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့် | cincds
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ - ၄
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အား ချင်းပြည်နယ်တီးတိန် (ဇိုမီး) အဖွဲ့မှ ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး Rev. Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung ဦးဆောင် သည့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ၊ ဧည့်ခန်းမဆောင် ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံ၍ (Gal Hang Pah Tawi Na Award) အား ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပေးအပ်သည်။
ဦးစွာ ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး Rev. Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung က ခရစ်စမတ်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းစကားပြောကြား၍ ဦးကပ်ခင်းပေါင်က တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်အား ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့ပေးအပ်မှုဆိုင်ရာ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကိုဖတ်ကြားပြီး ချင်း သူရဲကောင်းဘွဲ့ (Gal Hang Pah Tawi Na Award) အား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ထံပေးအပ်သည်။ ယင်းနောက် ဦးလျန်ခန့်တွောင်က ချင်းသူရဲကောင်း အကြောင်းအား ဖတ်ကြားပြီး ဦးခမ်းဆွင်းမုံက တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထံ ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့ အထိမ်းအမှတ်ဓား အား ပေးအပ်သည်။ ယင်းနောက် တက်ရောက်လာကြသည့်အဖွဲ့ဝင်များက တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ထံ ချင်းရိုးရာဓလေ့ထုံးစံ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးအပ်ကြသည်။
ယင်းနောက်ဘုန်းတော်ကြီး Rev. Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung က ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့ (Gal Hang Pah Tawi Na Award) အား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထံပေးအပ်နိုင်သည့် အတွက်များစွာဝမ်းမြောက်ရကြောင်း၊ ယနေ့သည် ချင်းတိုင်းရင်းသားများအတွက် သမိုင်းစာမျက်နှာ သစ်ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တပ်မတော်သည်နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအခန်း ကဏ္ဍများ တွင် ပါဝင်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသကဲ့သို့ အမိနိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်ခဲ့သည့် တပ်မတော်သည် ပြည်သူ များ၏လိုလားချက်ဖြစ်သည့် ဒီမိုကရေစီလမ်း ကြောင်းပေါ်သို့လည်း အောင်မြင်စွာလျှောက်လှမ်း နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်းသည် သမိုင်းဝင်ဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ချင်း တိုင်းရင်းသားများအနေဖြင့် တပ်မတော်နှင့်အတူ အမြဲရပ်တည်ဆောင်ရွက်နေမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
(ဂ)ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြည့်စုံသော တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက် အသက်နှင့် လဲ၍ကာကွယ်သည့် အရည် အချင်းပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်း။ စသည့်အချက်သုံးချက်နှင့် ကိုက်ညီသောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
နပွေညျတျော၊ ဒီဇငျဘာ - ၄
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျအား ခငျြးပွညျနယျတီးတိနျ (ဇိုမီး) အဖှဲ့မှ ကကျသလဈခရဈယာနျဘုနျးတျောကွီး Rev. Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung ဦးဆောငျ သညျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ၊ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ ၌ လာရောကျတှဆေုံ့၍ (Gal Hang Pah Tawi Na Award) အား ဂုဏျပွုခြီးမွှငျ့ပေးအပျသညျ။
ဦးစှာ ကကျသလဈခရဈယာနျဘုနျးတျောကွီး Rev. Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung က ခရဈစမတျဆုမှနျကောငျးတောငျးစကားပွောကွား၍ ဦးကပျခငျးပေါငျက တပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျအား ခငျြးသူရဲကောငျးဘှဲ့ပေးအပျမှုဆိုငျရာ ဂုဏျပွုမှတျတမျးလှာကိုဖတျကွားပွီး ခငျြး သူရဲကောငျးဘှဲ့ (Gal Hang Pah Tawi Na Award) အား တပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ ထံပေးအပျသညျ။ ယငျးနောကျ ဦးလနျြခနျ့တှောငျက ခငျြးသူရဲကောငျး အကွောငျးအား ဖတျကွားပွီး ဦးခမျးဆှငျးမုံက တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျထံ ခငျြးသူရဲကောငျးဘှဲ့ အထိမျးအမှတျဓား အား ပေးအပျသညျ။ ယငျးနောကျ တကျရောကျလာကွသညျ့အဖှဲ့ဝငျမြားက တပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျထံ ခငျြးရိုးရာဓလထေုံ့းစံ လကျဆောငျပစ်စညျးမြားပေးအပျကွသညျ။
ယငျးနောကျဘုနျးတျောကွီး Rev. Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung က ခငျြးသူရဲကောငျးဘှဲ့ (Gal Hang Pah Tawi Na Award) အား တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျထံပေးအပျနိုငျသညျ့ အတှကျမြားစှာဝမျးမွောကျရကွောငျး၊ ယနသေ့ညျ ခငျြးတိုငျးရငျးသားမြားအတှကျ သမိုငျးစာမကျြနှာ သဈဖှငျ့လှဈသညျ့နဖွေ့ဈပါကွောငျး၊ တပျမတျောသညျနိုငျငံတျောဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျမှုအခနျး ကဏ်ဍမြား တှငျ ပါဝငျထမျးဆောငျလကျြရှိသကဲ့သို့ အမိနိုငျငံတျောကိုကာကှယျခဲ့သညျ့ တပျမတျောသညျ ပွညျသူ မြား၏လိုလားခကျြဖွဈသညျ့ ဒီမိုကရစေီလမျး ကွောငျးပျေါသို့လညျး အောငျမွငျစှာလြှောကျလှမျး နိုငျအောငျဆောငျရှကျပေးခဲ့ခွငျးသညျ သမိုငျးဝငျဆောငျရှကျခကျြတဈခု ဖွဈပါကွောငျး၊ မိမိတို့ခငျြး တိုငျးရငျးသားမြားအနဖွေငျ့ တပျမတျောနှငျ့အတူ အမွဲရပျတညျဆောငျရှကျနမေညျဖွဈပါကွောငျး ပွောကွားသညျ။
(ဂ)ရဲစှမျးသတ်တိနှငျ့ပွညျ့စုံသော တိုငျးပွညျနှငျ့လူမြိုးအတှကျ အသကျနှငျ့ လဲ၍ကာကှယျသညျ့ အရညျ အခငျြးပွညျ့စုံသောပုဂ်ဂိုလျဖွဈခွငျး။ စသညျ့အခကျြသုံးခကျြနှငျ့ ကိုကျညီသောကွောငျ့ ယခုကဲ့သို့ ဂုဏျပွုခြီးမွှငျ့ပေးအပျခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။